विप्लवको विद्रोहले प्रचण्ड संकटमा !
काठमाडौं, ६ चैत । विप्लवले राजधानीमा जनशक्ति प्रदर्शन गरे, रोल्पा पुगेर अधिवेशन सम्पन्न गरेर समानान्तर होइन, वैकल्पिक सरकार चलाउने निर्णयमा पुगे । नेत्रविक्रम चन्दको यो विद्रोहले प्रचण्डका सामु तिमी सरकार प्रमुख, म पनि वैकल्पिक सरकार प्रमुख भन्ने चुनौती खडा भएको छ ।
मधेसमा मोर्चाको अप्ठेरो, ५० भन्दा बढी जिल्लामा विप्लवको वैकल्पिक सरकार : प्रचण्ड सिंहदरवारमा साँघुरिन थालेको अनुमान गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रचण्डको दावी हुटिट्याउँको धाक जस्तो पो हुनपुग्यो भन्छन् विश्लेषकहरु ।
विप्लवको नेकपा माओवादीले चैत ३ गते वैठक सम्पन्न गरेर प्रचण्ड सरकारलाई दलाल सत्ता भन्ने संज्ञा दिएको छ । यस्तो सरकारविरुद्ध बैकल्पिक सत्ता चलाउनै पर्ने निर्णयमा पुगेको विप्लवले नौटंकी चुनाव नगर्न समेत चेतावनी दिदै जनक्रान्ति लागू गर्ने बताएका छन् ।
पहिले चुनाव नबिथोल्ने भने पनि अवको नीति चुनाव विथोल्ने रहेको छ । यसका लागि देशव्यापी सक्रियता बढाउने भएको छ । - न्यूज अभियानबाट
मधेस आन्दोलन : छानबिन प्रदिवेदन सरकारसमक्ष पेश, के छ प्रदिवेदनमा ?
सिरहामा अविकासको दुई कारण ः कांग्रेसको झुर इतिहास र जातियताको नारा
आवाद गुलजार मधेस अव चमैक उठत – लीलानाथ श्रेष्ठ
मैले यस कारण जित्न आवश्यक छ – तुलसी प्रसाद यादव
मेरो जितले सामाजिक अन्तरघुलन फेरी कायम हुनेछ – लीलानाथ श्रेष्ठ
तुलसी प्रसाद यादवको लोकप्रीयता बढदै चुनाव प्रचार अभियानमा तिव्रता
कांग्रेसलाई जनतासंग भोट माग्न लज्जावोध हुनु पर्ने हो –मदनसेन प्रसाद श्रीवास्तव
अपार पुँजी भएर पनि मिर्चैया शहर फस्टाउन सकेको छैन – दिलीप साह
नेपाली समाजको बनौट र रुपान्तरणको प्रकृया – लीलानाथ श्रेष्ठ
राजनितिमा मैले चाणक्य आचरण पालन गरेको छु –लीलानाथ श्रेष्ठ
नाम मात्र मधेसवादी तर मधेस र मधेसी कै शोषण र दमन गर्छन्
नाम मात्र मधेसवादी तर मधेस र मधेसी कै शोषण र दमन गर्छन् –तुलसी प्रसाद यादव
Tweets by @madheshlive
Copyright © 2017 - Madheshlive.com - सर्वाधिकार सुरक्षित
Lahan, Siraha, Sagarmatha, Nepal
Mobile: 9862999977 / 9807799977